Noho ny tahotra fifidianana : Mitarika ny olona handika lalàna ny AND -
AccueilSongandinaNoho ny tahotra fifidianana : Mitarika ny olona handika lalàna ny AND
Efa mahafantatra fa tsy ho lany amin’ny fifidianana filoham-pirenena tanterahina amin’ity taona ity i Edgar Razafindravahy, mpitarika ny antoko Antoka sy Dinan’ny Nosy (AND). Mitady hirika mafy hanakorontanana ny fifidianana noho izany ny tenany sy ireo mpanara-dia azy amin’izao volana vitsy mialohan’ny hanatanterahana azy izao. Milaza ny tsy hanaiky ny hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena avy hatrany ny mpitarika ity antoko ity, fa izany fanarenana ifotony izany hono no tokony hatao laharam-pahamehana. Hatramin’ny androany anefa mbola tsy hita izay tena vokatry ny filazany fa fizahana ifotony ny fahasahiranam-bahoaka teny anivon’ireo fokontany maro izay efa notsidihiny. Nijanona ho fampanantenana fotsiny mantsy hatreto izay nolazain’i Razafindravahy teny ifotony, fa toa mbola tsy misy fivoarany ny fiainan’ireny olona any ambany ravinkazo ireny. Mijanona eo amin’ny resaka ifanaovana ihany fa tsy misy fanatanterahana ka mankaleo ny mponina any amin’ireny toerana efa notsidihiny ireny. Noho io antony io dia sokajian’ny vahoaka ho mpanao kobaka am-bava mitovy amin’ireny mpanao politika efa zatra ny lalan-dririnina ireny ny AND sy ny mpitarika azy, ka izay no antony mahatonga ny rehetra miandrandra ny fanatanterahana ny fifidianana.
Araka ny fanapahana izay navoakan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana (HCC), dia tsy maintsy atao amin’ity taona ity ny fifidianana filoham-pirenena. Fanapahana toa manamafy izay voalazan’ny lalàm-panorenana satria mifarana amin’ity taona ity ihany koa ny fe-potoam-piasan’ny filoha am-perinasa. Izany hoe nanamafy izay efa voasoratra ao anatin’ny lalàm-panorenana ilay fanapahana navoakan’ny Hcc momba ity fanatanterahana ny fifidianana ity ka tsy tokony hodikaina. Tokony hiara-hisalahy amin’ny fandavorariana azy avokoa noho izany ny rehetra indritra ireo milaza azy ho mpanao politika manana tsangan-kevitra. Tsy toa izay anefa ny nataon’ny antoko AND sy Edgar Razafindravahy fa nialany tanteraka ilay soatoavina demokratika, dia ny fifandimbiasan-toerana madio. Nangoniny avokoa araka izany ireo mpitarika antoko politika tsy misy mpikambana, sy ireo mpanao politika mpitady seza tsy te handalo fifidianana hanohana azy amin’ny fanakanana ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy misy maharatsy azy raha toa ka tena ho fanatsarana ny toe-piainan’ny vahoaka malagasy ny hanaovana ilay fanorenana ifotony. Fitadiavan-tseza amin’ny fomba moramora anefa taratra raha izao fahitana ny AND sy ireo mpanara-dia azy izao. Raha te hanova zavatra tokoa mantsy i Edgar Razafindravahy sy ny antokony, dia maka fahefana amin’ny alalan’ny fifidianana aloha fa tsy mandositra fitsaram-bahoaka toa izao. Izay rahateo no efa nimatimatimatesan’ity antoko ity, taorian’ny tsy nahalany azy tamin’ny fifidianana filoham-pirenena tamin’ny taona 2013.